Warar - Faa'iidooyinka villa biraha fudud
Waxaa jira sababo qotodheer sababta nidaamka birta birta ah ee birta ah, oo ay kujiraan guryo dabaqyo iyo dabaqyo iyo dabaqyo ah, ay si xawli leh u kobcayaan. Marka la barbardhigo qaababka kale ee guryaha qaabdhismeedka birta, nidaamka guryaha isku dhafan ee birta ah ee TUOOU, gaar ahaan qabow-sameysma guryaha keel biraha fudud, ayaa leh faa'iidooyin dhammaystiran oo gaar ah:
(1) nalka birta birta fudud, xoog sare, waxqabadka dhul gariirka wanaagsan, badbaadada sare. Dhismaha laftiisu waa mid aad u fudud, oo keliya qiyaastii kalabar miisaanka dhismaha shubka.
(2) qaybaha keel birta nalka fudud iyo soosaarka agabyada warshada iyo farsameynta, heerka ganacsiga sare, fudud si loo gaaro warshadeyn, warshadeyn, waxay gaabin kartaa wareegga dhismaha
(3) Qaybta qayb ka mid ah qaybtu waa yar tahay, taas oo kordhin karta aagga wax ku oolka ah ee dhismaha qiyaastii 8% marka la barbar dhigo qaab dhismeedka la taaban karo. Saqafku wuxuu qaataa qaab dhismeedka biraha, kaas oo dhisi kara qaab saqaf ah oo qaab-dhismeed fara badan leh, muuqaal qurux badan, oo la kulmi kara shuruudaha shakhsi ahaaneed ee dhismaha.
(4) Biyaha gudaha iyo dhuumaha korontada ku shaqeeya waxaa lagu aasi karaa darbiga, iyadoo la wajihi karo qaab debecsan iyo wax ka beddel habboon. Waxay ku habboon tahay qaadashada ilaalinta deegaanka iyo guddiga darbinta tamarta-keydinta, daaqadda sagxadda iyo guddiga saqafka oo leh tiknoolajiyad sare, waxayna leedahay saameyn wanaagsan oo keyd ah.
(5) Sawaxanka dhismaha birta birta ah waa yar tahay, qashin dhisme yar, qalabka la isticmaalay badanaa waa dib loo warshadeyn karaa ama alaab dabiici ah, oo ku habboon ilaalinta deegaanka bey'ada, iyadoo la raacayo shuruudaha dhismaha cagaaran iyo horumarka waara, waxaa iska leh dhismaha ilaalinta deegaanka cagaaran.
(6) Marka loo barbardhigo qaab dhismeedka shubka bulukeeti caadi ah, wadarta isticmaalka tamarta ee qaab-dhismeedka birta fudud waa 30% qiiqa kaarboon laba ogsaydhkana waa la dhimay 67%.
Marka loo eego natiijooyinka dalabka wax ku oolka ah, qiimaha dhismaha nidaamka birta birta fudud ee aagga dhulgariirka iyo aasaaska carrada jilicsan ayaa waxyar ka hooseeya ama ka siman kan nidaamka qaab dhismeedka shubka la xoojiyey, oo leh tartan xoog leh. Iyadoo la tixgelinayo isticmaalka muddada-dheer, isbeddelka horumarka iyo shuruudaha ilaalinta deegaanka, villa biraha fudud wuxuu leeyahay rajo horumarineed oo wanaagsan iyo baahi weyn oo suuq ah, taas oo si tartiib tartiib ah u noqonaysa "barta iibinta" cusub ee suuqa guryaha. In kasta oo aan guryaha Shiinaha si baaxad leh looga isticmaalin Villa-yada birta ah, waxaan aaminsanahay in mustaqbalka dhow, Villa-yada biraha fudfudud ay ka soo dhalaali doonaan meel kasta oo ka mid ah Shiinaha.